Guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo Muqdisho kula kulmay Ururada Bulshada Rayidka. | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo Muqdisho kula kulmay...
Guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo Muqdisho kula kulmay Ururada Bulshada Rayidka.
Sidoo kale,Diini Maxamed Diini,Gudoomiyaha Dallada Ururada Bulshada rayidka (SOCHENCA) ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya looga baahan yahay in dhaqaalaha ku baxaya dastuurka ay bixiso .
Guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka iyo Guddiga madaxa banaan ee dastuurka ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay waday la tashiyo ay la yeelanyeen qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Previous articleMarwada Koowaad ee Dalka oo ka qeyb gashay xuska Maalinta Haweenka Adduunka (SAWIRRO).
Next articleMadaxweyne Waare oo Jowhar ku qaabbilay Saraakiil ka socotay QM (SAWIRRO).